August 2020 – FunInsights
နေရာတကာမှာ ဖြစ်သလိုအိပ်တတ်ကြတဲ့ ခွေးလေးတွေရဲ့ချစ်စရာဓာတ်ပုံများ – ပုံ(၂၀)
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ခွေးလေးတွေဟာ အချိန်မရွေး နေရာမရွေးဘဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အိပ်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ ခွေးမွေးဖူးတဲ့သူတိုင်းသိကြပါလိမ့်မယ်။ ယခုတစ်‌ခေါက်မှာတော့ ခွေးပိုင်ရှင်အချို့က သူတို့ခွေးလေးတွေရဲ့ ဖြစ်သလိုအိပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။ ၁၄။ ၁၅။ ၁၆။ ၁၇။ ၁၉။ ၂၀။
သင့်ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိမေးခွန်း(၁၀)ခု
Quizzes / By Mario
ယခုတစ်‌ခေါက်မှာတော့ မိတ်‌ဆွေတို့အတွက် အမြင်အာရုံလေ့ကျင့်ခန်း၊ အတွေးအခေါ်နဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်မှုများကို တိုးတက်စေဖို့အတွက် ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများကို ဖြေဆိုကြည့်ကြရအောင်။ ၁။ ဒီပိရမစ်ပုံလေးကို အပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ပုံဖြစ်နိုင်မလဲ ? ၂။ ပုံထဲမှာ စတုရန်း ဘယ်နှခုပါပါသလဲ ? ၃။ သော့ အမှန်က ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ ? ၄။ ပုံထဲမှာ မတူညီတဲ့လူ ဘယ်နှယောက်ပါလဲ ? ၅။ ဘယ်ဝက်ဝံရုပ်က ကွဲပြားနေပါသလဲ ? ၆။ ပုံထဲမှာ ပစ္စည်းဘယ်နှခုပါလဲ ? ၇။ ကြယ်ပုံစံ အချွန်(၄)ခုပါတဲ့ပုံက ဘယ်နားဖြစ်မလဲ ? ၈။ ပုံထဲမှာ ဘယ်သူက အဆင်းရဲဆုံးလဲ ? ၉။ ပုံထဲမှာ ကုဗတုံး ဘယ်နှခုပါသလဲ ? ၁၀။ ပုံထဲမှာ တြိဂံ …
သင့်ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိမေးခွန်း(၁၀)ခု Read More »
သင် ပထမဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ပုံကနေ ပြောပြပေးနိုင်မယ့် သင့်ရဲ့အကြောင်းများ
ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်အကြောင်းသင် အားလုံးမသိတာက သင်ထင်ထားတာထက်ပိုပါတယ်။ သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ စူးစမ်းလေ့လာစရာတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတာကြောင့် ဒါဟာ သံသရဖြစ်စရာအကြောင်းတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို အောက်ဖော်ပြပါအချက်လေးတွေနဲ့ စမ်းစစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပုံတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ သင်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာ ကော်မန့်မှာပြောသွားပေးခဲ့ပါဦးနော်။ သင် ဘာကိုအရင်ဆုံး မြင်ပါသလဲ ? သော့ ။ ။ သော့ကို အရင်ဆုံးမြင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သက်တောင့်သက်သာနေခြင်းထက် မသိသေးတဲ့အရာများကို စူးစမ်းလေ့လာရတာတွေကိုနှစ်သက်ပြီး အသစ်အဆန်းတွေကို အမြဲသင်ယူတတ်သူပါ။ ငိုနေတဲ့ပုံ ။ ။ ငိုနေတဲ့ပုံလေးကို အရင်ဆုံးတွေ့ရင်တော့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့အရာများကို ပိုပြီးတော့ ဦးစားပေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သင့်ရဲ့အတွေးတွေကို ပြေလျော့ရှင်းလင်းစေဖို့အတွက် အချိန်ပေးကာ အနားယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မျက်နှာ ။ …
သင် ပထမဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ပုံကနေ ပြောပြပေးနိုင်မယ့် သင့်ရဲ့အကြောင်းများ Read More »
အဝလွန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံများ – ပုံ(၂၀)
လူတွေမှာလည်း အဝလွန်တဲ့သူတွေရှိကြသလို တိရိစ္ဆာန်တွေမှာလည်း အဝလွန်နေတဲ့ အကောင်များစွာရှိကြပါတယ်။ အချို့သောတိရိစ္ဆာန်လေးတွေဟာ အဝလွန်နေပေမယ့်လည်း ချစ်စရာကောင်းတာကြောင့် သူတို့လေးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံများကို မျှဝေတင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။ ၁၄။ ၁၅။ ၁၆။ ၁၇။ ၁၈။ ၁၉။ ၂၀